Iipayipi zeeVenkile zeoyile kunye neRhasi Umzi mveliso, abaXhobisi - Ivaluva yeeValayitha ze - oyile kunye ne - China abavelisi
Ukucaciswa kobuchwephesha Ubungakanani begama: DN25 ～ 300 (NPS1 ～ 12) Uxinzelelo lwegama: CLass150 ～ 900 Uyilo olusezantsi: EN 14382 、 Q / 12WQ 5192 Ubushushu boYilo: -29 ℃ ～ + 60 ℃ ； -46 ℃ ～ + 60 Material Izinto zoMzimba Ixesha lokuphendula kwi-WCB, A352 LCC: ≤0.5s (ukuya kuxinzelelo lokusebenza kunye nobubanzi bevalve) Misela ukuphambuka: ± 2.5% Imizi-mveliso Esebenzayo Isitishi sokudlulisa igesi somgama wombhobho omde; Isitishi esilawula uxinzelelo lwegesi; Inkqubo yolawulo loxinzelelo lwegesi, njl.
Orbit Ibhola Valve
I-ConVISTA ye-Orbit BalValve ilungele ukusetyenziswa ngokungqongqo xa iBig DifferentiaOperation Pressure Yenzeka, Rhoqo ukusebenza, Uxinzelelo kunye neTemperature DifferentiaRequest Valve Ukutywinwa okuhle kwiXesha elide okanye kwisicelo Akuvumelekanga ukuba kugcinwe ixesha lokuphumla okanye Faka endaweni yeValve efana nale:
Trunnion Onyuswe Ball Valve
Iinkcukacha Uhlobo lwe-EFB Uhlobo loYilo lwe-API 6D, i-API 608, i-BS 5351, i-ANSI B16.34 uNominaDiameter DN100 ~ DN1200 (NPS 4, ~ NPS 48 ″). I-Pneumatic Actuator, i-Pneumatic Hydraulic Actuator njl.Izinto eziluncedo Kwisicelo esahlukileyo, umzimba we-balvalve onyuswe unokusebenzisa: intsimbi yekhabhoni, intsimbi engenasici, isinyithi sobushushu obuphantsi, izinto ezichasene nesalfure. C ...
Inkcukacha l Uhlobo l EFB Uhlobo l Uyilo Ukucaciswa l API 6D, API 608, BS 5351, GB 12237 l Ububanzi obuQokelelweyo l DN15 ~ DN200 (NPS 1/2 ″ ~ NPS 8 8) l Uxinzelelo loxinzelelo l PN1.6MPa ~ PN6 3MPa ( IClass150 ~ Class300) l Actuator l Manual Operated, Electrical Actuator njl. vala, inkonzo ende l ...
Iinkcukacha Uhlobo lwe-FWB Design Specification ASME B16.34, API 6D NominaDiameter DN15 ~ DN500 (NPS 1/2 ″ ~ NPS 20) Pressure PN1.6MPa ~ PN25.0MPa (Class 150 ~ Class1500) Four-way balvalve also known as four way I-valve ejikelezayo, okwangoku, le valve inikezelwa ikakhulu kwi-clockwise kunye nenkqubo yokuhambisa amanzi ejikelezayo ngewotshi yesixhobo esipholileyo kwisikhululo samandla. Uyilo lwe-Conventionapiping lwendlela ejikeleze iwotshi kunye nokujikeleza kwamanzi ujikeleze kusetyenziswa ...
Ezintathu Way Ball Valve
Iinkcukacha Uhlobo LWB (Port) TWB (T Port) Uyilo Ukucaciswa ASME B16.34, API 6D NominaDiameter DN15 ~ DN500 (NPS1 / 2 ″ ~ 20 ″) Pressure Rating PN1.6MPa ~ PN25.0 MPA (Class150 ~ Class1500) Kukho L izibane-ndlela ezintathu ibhola vana kunye T Port Ezintathu Way Valve. I-port port ye-valve yeendlela ezintathu inokunceda le mibhobho ye-orthogonality edityaniswe kunye okanye ivale umbhobho wesithathu, yenzelwe ukuhanjiswa kunye nokuqokelelwa. L port-ndlela ezintathu ibhola vana kuphela ukunceda ...
Oluludaka Ball Valve
Ulwazi lweMveliso l Uhlobo l SB Uhlobo l Uyilo lokucacisa l API 6D, ANSI B16.34 l Ubungakanani besiKhokelo l DN25 ~ DN 900 (NPS1, ~ NPS36 ″) l Umatshini wokwenza izinto ngesandla oSebenzayo, isixhobo seMbane, iPuatic Actuator njl njl. Iingenelo zokwenza i-slurry BalValve isebenzise ubuchwephesha obunini bamalungelo awodwa omenzi wechiza, ukuhambisa i-slurry, kuthathelwe ingqalelo ngakumbi kuyilo lokuhamba kwevalve ...